I-Stonefly Studio - I-Airbnb
Coram, Montana, i-United States
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Keanan
U-Keanan Ungumbungazi ovelele
Lesi isitudiyo esizimele esingu-700 sq ft esihlala izivakashi ezingafika kwezi-4. Kukhona imibhede egcwele engu-2, umbhede wendlovukazi ongu-1, nendawo enkulu ethokomele. Itholakala nje kumamayela angu-7 ukusuka ekungeneni osentshonalanga kwe-GNP, futhi ngezansi nje komgwaqo ukusuka endaweni ebabazekayo ye-Hungry Horse. Futhi, ibanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka ezindaweni zokudlela ezi-2 nendawo yokuphumula. Kukhona umpheme omkhulu, ozosingatha ifenisha yangaphandle yezivakashi.
Lena indawo ethule engu-1/3 yemayela ukusuka emgwaqeni omkhulu emgwaqweni oseceleni. Kukhona nendathane yendawo yokupaka.
Umbhede omkhulu ongu-1, umbhede oyidabulu engu- 1, 1 umbhede wosofa, 1 umbhede oyidabuli omncane
ubusuku obungu-7 e- Coram
4.82 · 57 okushiwo abanye
I-Glacier grille, i-Trapline cafe, i-Stonefly lounge, kanye ne-Glacier Distilling Company konke kungaphakathi kohambo lwamaminithi angu-5. I-Packers roost, ibha kanye ne-grille, ukuhamba ngemizuzu emi-2. Le ndawo iphakathi nendawo phakathi kwedolobha laseColumbia Falls, kanye neGlacier National Park, endaweni eyikhilomitha yomfula iMiddle Fork Flathead!
Ngizotholakala kukho konke ukuhlala kwakho ukuze ngiqinisekise ukuthi ujabulile ngendawo yokuhlala.
UKeanan Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Coram namaphethelo